Iindaba - oluthambileyo umbhobho zentsimbi izixhobo
Singabantu umenzi ngobuchule izixhobo umbhobho zentsimbi oluthambileyo e China, kunye neminyaka engaphezu kwama-30 kule nkalo. Ukuthunyelwa kwempahla kumazwe amaninzi, njenge-United Kingdom, iPoland, iRashiya, i-Australia, iMalaysia, i-Indonesia, i-Saudi Arabia njl. Njl. Uninzi lwabathengi siye saseka ukusebenzisana okuhle kunye nexesha elide.
Nazi ezinye zeemveliso zethu eziphambili iinkcukacha Yemiqadi yokuhlanganisa omoya; Ukudibanisa iiCamlock; Imibhobho yentsimbi yeCarbon kunye nokufakwa kwamandla kombane, zonke ezo mveliso zifakela izixhobo ezinophawu lwe-SDH. Ngaphandle koko, simisele inkqubo esemgangathweni ehambelana ne-IS0 9001: 2008 kwaye siye sanikwa isatifikethi seCRN eCanada, eYurophu ye-CE naseTurkey yeTSSE.
Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zabathengi nathi sinokuvula isikhunta esitsha kwimveliso entsha, ukuba unayo isampulu yento entsha okanye umzobo, wamkelekile uqhagamshelane nathi. Uyilo olulungileyo kunye nesampulu entsha inokubonelela ngesiqinisekiso sakho. Sineqela lethu lobugcisa lokwenza uyilo kwaye sineeworkshop yethu yokuphonononga ukuvavanya isampulu. Ekuqaleni sisebenzisa ukungunda kwesanti emnyama, ngoku zonke ziphuculwe ukuze kusetyenziswe ukubumba kwesanti etyheli, umphezulu ugudile ngakumbi, imveliso eninzi sisebenzisa umatshini we-CNC ukuqinisekisa ukuba ubungakanani buchanekile ngakumbi. Kwakhona sinesebe lethu le-QC ukuvavanya iimpahla kwimveliso. Umsesane okhethekileyo wokulinganisa, ukulinganisa intambo, ukuvavanya umsonto, igeji yokulinganisa ukuvavanya i-angle ukuze uqiniseke ukuba zonke iimpahla zinokufikelela kumgangatho onokuzithumela.
Ixabiso elikhuphisanayo, olona mgangatho uphezulu, isitokhwe esininzi kunye nokuhanjiswa okukhawulezayo ziluncedo lwethu olukhulu. Ndiyathemba ukuba singakha intsebenziswano yeshishini kwixa elizayo.
Iingono zensimbi ezingenanto, Air Hose Coupling Europen Uhlobo, Imibhobho Stainless Stainless, Coupling yomoya, Ukudibanisa uMbhobho womoya, Iingono Stainless kunye neZilinganisi,